I-Sunscreen for Baby & Todler ... Ezempilo nokukhusela | Amaphepha ombala wamahhala okukhuphela
I-Sunscreen for Baby & Todler ... Impilo noXhoselo
Izambatho ezifanelekileyo zelanga zentsana kunye nentombazana
Ukuze abantwana kunye nabantwana banelisekele ilanga ngokupheleleyo, kubalulekile ukuthatha iziqaphelo. Oku kuyinyani ngokukodwa, kuba ilanga elithe ngqo lifanele libe yinto ebantwaneni kubantwana be-2.
I-sunscreen ekhethekileyo yesikhumba seentsana kunye nabantwana abaselula
Oku kubalulekile kuba ulusu lweintsana kunye nabantwana abaselula lubuhlungu. Ngokukodwa xa kuthethwa ukukhanya kwe-UV.
Ukukhuselwa kwelanga kwintsana kunye nentombazana encinci - nxamnye nokuxhatshazwa ngexesha lokucoca
Ulusu lusaluncinci kwiminyaka yokuqala yobomi kwaye ukhuseleko lwe-UV, olujikeleza ulusu, kufuneka luqale luphucule oko kwenzekayo kwiminyaka yokuqala yobomi. Ewe, abantwana kufuneka banike ithuba lokudlala, ukudlala nokuhamba ngaphandle. Kakade ke, ekubeni abantwana baphoqeleka ukuba bavelele kwimisebe ye-UV, kufuneka kuthathwe amanyathelo okukhusela.
Kubalulekile ukuba abantwana basebenzise ininzi yabo yokuqala kwiminyaka emibili yobomi emthunzini. Ngokukodwa ngelo xesha, abantwana kufuneka bavelele kwincinci kangangoko okanye kuncinane kangangoko kunokwenzeka ukukhanya kwelanga. Izithuba ze-Shady zilungele apha.
Ilanga elichanekileyo kufuneka livinjelwe kunye ne-sunscreen efana ne-hood okanye i-parasol, njengoko ingabangela ukuba abantwana batye. Ngomnyaka wokuqala wobomi kufuneka uyenze ngaphandle kwesikrini. Oku kungabangela umthwalo ongenakunzima ulusu olunzima kakhulu lwabancinci.
Kwakhona kubalulekile ukuba ioli ye-baby ayiyiyo yelanga. Ngethuba leoli, i-photosensitivity yolusu yengane isaphakanyiswa. Kodwa kungekhona kuphela kwiintsana, kwanabantwana de kube sesikolweni seminyaka yobudala, kubalulekile ukuba bagweme ilanga elivuthayo. Kuba malunga neyure ngosuku, abantwana kufuneka badlale, bahlaziye kwaye bahambe emoyeni omtsha. Oku kukuxhasa ukuphuhlisa abantwana. Ngokufanayo ukuzakhela kwe-vitamin D. ebalulekileyo
Kodwa ilanga elithe ngqo liyakunqandwa nakwiminyaka emibini yokuqala yobomi. Oku kubangelwa kukuba i-kliniki yabantwana ayikwazi ukuvelisa iingubo, eziyinxalenye yokukhuselwa kwemvelo, ngokwaneleyo kwaye ngokukhawuleza. Ukutshatyalaliswa kwelanga kunye nokubomvu kufanele kugwenywe kuzo zonke iindleko. I-sunscreen eyona nto isebenzayo ihlala ihlanganiswe kwiindawo ezinomthunzi kunye nezambatho ezongezelelekileyo zelanga.
Ukongeza kwimimandla e-shady, i-sunscreen eyona nto ilungileyo yinto efanelekileyo yokugqoka. Ingakumbi intloko, ingakumbi entanyeni, iindlebe kunye nobuso zibuhlungu. Ngako oko, umntwana kufuneka ahlale egqoba i-cap, ihappy, okanye efana nelanga. Zonke ezinye iingubo kufuneka zibe ne-airy kwaye zihlale zimboza ubuninzi bomzimba ngokusemandleni.
Kufuneka kwakhona kuqaphele ukuba akuzona zonke izinto ezizinzileyo. Nangona kunjalo, kukho izambatho ezikhethekileyo zelanga, ezinika ukhuselo olungcono ngeempahla ezikhethekileyo.
Eyona ndlela ifanelekileyo ihambelana ne-UV standard 801 kwaye ibe ne-UV factor protection ye-30. Kananjalo nezicathulo, ezi zifanele zibandakanye ubuninzi benyawo kunokwenzeka.
I-Sunscreen njengomnye umlinganiselo
Ukongeza kwiingubo ezifanelekileyo, zonke izitho zomzimba ezingavulwe zifanele zikhuselwe ngumhlaza owenziwe ngelanga. Kufuneka kuqatshelwe ukuba ukukhwela rhoqo kufuneka kungabikho abantwana abavunyelwe ukuba badlale ilanga elivuthayo. Sebenzisa kuphela i-sunscreen kuphela eyenzelwe abantwana.
Ukongezelela, umntu kufuneka aqiniseke ukuba imali idla isikhumba esilukhuni sabantwana ngaphezu kwama-lotions kunye nama-creams. I-sunscreen ekhethiweyo kufuneka ivalise ii-ray ze-UV-A kunye ne-UV-B kwaye kufuneka zibe ne-SPF enye ye-20. Zonke iindawo ezingabonakali zifanele zenziwe nge-30 imizuzu ngaphambi kokuphuma. Kwakhona, kufuneka usebenzise i-sunscreen ngokwaneleyo.
Ukuba ixesha elide lihleli ngaphandle, icebo kufuneka liphindwephindwe. Ikakhulukazi emanzini, ingozi yokushisa ilanga iyanda. Ngoko ke, kufuneka kusetyenziswe i-sunscreen engenamanzi.
Njengoko ilumkele ilanga njengoko ulusu lusehlo. Ukuba ezi zinzima kakhulu yi-UV-B, kunokukhokelela ekuvukeleni kwe-conjunctiva kunye ne-cornea.
Iimvani zeeklasi kubantwana kufuneka zigcine ii-ray eziphezulu zithembekileyo
Kungenxa yoko izilwanyana zokukhanyisa ngeelanga ezikhuselekileyo akufanele zilahleke.
Nangona kunjalo, kubaluleke kakhulu ekukhuselweni kwelanga ukuba abantwana banomzekelo omhle, ngoko ke bonke abazali kufuneka baqwalasele ukukhuselwa kwelanga elaneleyo. Ngoko abantwana bajonga kwiminyaka yokuqala, ukuziphatha okufanelekileyo kwelanga elitshatayo.
Ngoko abazali akufanele bachithe ixesha elide kwilanga elivuthayo kwaye bahlale bezikhusela ngeempahla ezifanelekileyo kunye ne-sunscreen.
Iikhabhinethi yeKhabhinethi kunye neeMviwo zeKhabhinethi Ukuthintela impilo
Uphuhliso lwemozulu | Ukuthintela impilo
Inambuzane ihlabayo ... Ukuthintela impilo
Ukuhlawula | Ukuthintela impilo
Amayeza ekhaya | Ukuthintela impilo
Ukutshisa i-Reflux Disease | Ukuthintela impilo
Ukunqongophala kweensimbi: Ukuthintela impilo